उत्तर कोरियाली जनता आखिर के खान्छन् ?
HOME » उत्तर कोरियाली जनता आखिर के खान्छन् ?
बीबीसी। आफ्नो अनियन्त्रित परमाणु कार्यक्रमका कारण उत्तर कोरिया कयौं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदसमेत कयौं देशले उत्तर कोरियाको परिमाणु कार्यक्रमका कारण प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले प्रतिबन्धमार्फत उत्तर कोरियाको आय स्रोतलाई कस्ने कोशिस गरेको थियो। उत्तर कोरियाबाट हुने कपडाको निर्यातमा रोक लगाउनुका साथै सिमानासम्म मात्र कच्चा तेलको आयातको अनुमति दिएको थियो। त्यसबाहेक अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानले पनि उत्तर कोरियामाथि धेरै प्रकारका प्रतिबन्ध लगाएका छन्। सो प्रतिबन्धपछि उत्तर कोरियामाथि आर्थिक संटक उत्पन्न भएको छ। मुलुकभित्र प्रयाप्त मात्रामा खाने कुराको उपलब्धता कम हुँदै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा उत्तर कोरियाले खानाको अभाव हटाउन नयाँ खाने कुरा बनाउन सुरु गरेका छन्। त्यसो त उत्तर कोरियामा विगत केही वर्षदेखि खानाको कमी सामान्य हुन थालेको थियो। यही कारण उत्तर कोरियाली नागरिकले सामान्य खाद्य सामाग्रीलाई पनि धेरै विधिबाट बनाउन थालेका छन्।
माथि तस्बीरमा देखिएको पकवानको नाम हो, सोक्काडुजियन। यसमा आम भाषामा ‘क्विक केक’ पनि भनिन्छ। यो केकलाई बनाउनकालागि बेक गर्न आवश्यक छैन। र यसलाई बनाउन पनि थोरै समय लाग्छ।
होङ युन हेई केही समय पहिला उत्तर कोरियाबाट भागेर दक्षिण कोरिया पुगेकी थिइन्। उनले आफूले स्वादिलो केक बनाउने बताएकी छन्। होङ युन हेई सोलमा एक रेस्टुरेण्ट चलाउँछिन्। उनका अनुसार उत्तर कोरियामा सामान्य नागरिक भुट्टा (एक प्रकारको केक) खान्छन्। किनभने त्यो चामल भन्दा सस्तो हुन्छ। होङ युन हेईले आफ्नो होटलमा यो खाना बनाएर देखाइन् जुन परिकार उत्तर कोरियाली नागरिक खानाको कमी भएपछि बनाउँछन्।
यो खानाको नाम हो इंजेक्टर । यो शाहाकारी प्रोटिनले युक्त छ। यसको अर्को नाम ‘ह्युमन मेड मिट’ पनि हो। यो शाहाकारी मासुजस्तै हुन्छ। जसलाई सोयाबिनबाट बनाइन्छ।
यसको नाम हो इंजोगोगिबाब। यसलाई इजोगोजीको मासुबाट बनाइन्छ। यसलाई भातसँग वा माछासँग खाइन्छ। यसमा क्यालोरी निकै कम हुन्छ। जवबि प्रोटीन र फाइभर धेरै हुन्छ।
यो खाने कुराको नाम डुबुबाब हो। यो चामलको पिठो जस्तै देखिन्छ। उत्तर कोरियाली नागरिककालागि यो सस्तो खाना हो।
राजतन्त्र र गणतन्त्रमा केही फरक भएन! अब अर्को क्रान्ति हुन्छ : सुन्दरमणि दीक्षित (भिडियो)
दशैँको बेला सेवाग्राही नै कम
बंगलादेशमा नेपाली बिद्यार्थीहरुले यसरी मनाए दशैं (फोटोफिचर)